Rafitra vaovao fanaraha-maso & fitantanana vaovao ho an'ny Broadcasters | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Rafitra vaovao fanaraha-maso & fitantanana vaovao ho an'ny Broadcasters
Rafitra vaovao fanaraha-maso & fitantanana vaovao ho an'ny Broadcasters
Ny votoatin'ny fampielezam-peo dia tsy vitan'ny fifantohana amin'ny atiny. Izy io koa dia voafaritry ny fanolorana sary. Mahafantatra tsara ny fahaiza-mamorona eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery, ary mety hanangana mpihaino iray, no hamaritana ny fomba nanolorany ny marika, izany no antony maha-fanaraha-maso azy io. SuiteLife Systems Malaza amin'ny fanomezana ny sehatra rehetra amin'ny indostrian'ny fahitalavitra miaraka amin'ny Advanced Automation System Solutions. Raha ny marina, ny vaovao farany amin'izy ireo Platform fanaraha-maso & fitantanana sehatra, ny GPX-32 Pro, dia fitaovana ilaina hanamafisana ny fitantanana ny atiny.
Momba ny SuiteLife Systems
Nandritra ny 20 taona, SuiteLife Systems dia niara-niasa tamin'ny orinasan-tserasera nitarika tamin'ny fizarana ireo vokatra rindrambaiko Axess nandresy amin'ny loka izay natao manokana hanaraha-maso, fanaraha-maso ary fitantanana ireo trano sy tranokala lavitra. SuiteLife Systems ' Ny vahaolana dia misy ny studio / fotodrafitrasa, ny fitantanana trano maranitra / maitso ("BMS"), RF / fifindrana / microwave, ary rafitra fitantanana ny herinaratra, izay natao indrindra ho an'ny indostrian'ny fampitana sy ny fifandraisan-davitra. Ny orinasa koa dia manome fampandrosoana ny rindrambaiko, consulting IT, ary fanohanana 24/7.
SuiteLife Systems ' Mifototra amin'ny scalability, flexibility, usability ary maintainability ny fomba fiasa miaraka amin'ny SLS. Ny rindrambaiko dia manolotra fahitalavitra TV sy Radio Broadcasting dia manara-maso ny vahaolana fanaraha-maso sy fanaraha-maso feno miaraka amin'ny fampifanarahana tsy hay fehezina. Ity dia miainga avy amin'ny fanaraha-maso tsotra ny tranonkala iray tokana mankany amin'ny vahaolana NOC mifehy tranonkala an-jatony, manara-maso ireo isa data marobe tsy manam-petra, famatsiana SLS voaporofo, famoahana azy indray mandeha izay hitantana sy hanara-maso ary hifehezana ny tontolon'ny oniversite mandritra ny am-polony taona maro. , fa tsy volana vitsivitsy. Ary ankehitriny, miaraka amin'ny vaovao GPX-32 Pro Fanaraha-maso & fandaharana fanaraha-maso, Ny mpanao gazety dia hanana fotoana mora kokoa hitantanana ny atiny.
SuiteLife Systems GPX-32 Pro
Inona no mahatonga ny GPX-32 sehatra lehibe iray ho an'ny Broadcasters, dia ny fantsona iraisan'ny rehetra izay natao manokana hanohanana fantsom-pifanarahana 32 mitovitovy, sata (amin'ny alàlan'ny opto-mitoka-monina) ary ny fifehezana (amin'ny alàlan'ny fifandraisana miandalana) isaky ny vondrona. izany Pro Fanaraha-maso & fandaharana fanaraha-maso nandika ny fantsom-pahalalana ankapobeny sy ny famoahana ("GPI / GPO") amin'ny alàlan'ny loharano data TCP / Ethernet ho fanodinana mampiasa ny Axess rindrambaiko.
Iray tokana Axess ny rafitra dia afaka mametraka ny isan'ireo GPX-32 vondrona, izay mamela ny fanitarana GPIO saika tsy voafetra. The GPX-32 dia mifandraika amin'ny Ethernet, ary midika izany fa azo apetraka na eo an-toerana na lavitra ilay mpampiantrano azy Axess rafitra ho an'ny fanitarana mora foana.
Satria ny GPX-32 dia "matoantenin'ny ataoFitaovana, fitaovana fampidirana fampahalalana dia avy amin'ny fitaovana toy ny hafanana amin'ny mari-pana, ny fanairana ny varavarana ary ny jiro miova Ampidirina ao anatin'ny GPX-32 namboarina amin'ny mari-pana / ny hamandoana, ny mains, ary ny fanaraha-maso volavolan-tena DC miaraka amin'ny asa 110 / 240AC sy 20-60VDC.
The GPX-32 dia manana ny Punch Down Panel (PDP), izay ampiasaina hanamorana ny fampifandraisana ireo fitaovana peripheral passive ho an'ny interface an'ny sehatra. Ny tariby dia misy tariby 4, 2 x SCSI 50pin, ary 2 x SCSI 68pin, izay mampifandray anelanelan'ny GPX-32 ary ny interface an-tariby. The Punch Down Panel dia manana PCB napetraka 110 bà, konekta SCSI ary jumpers. Ny PCB dia napetraka amin'ny rindrina vy 2RU hamela ny fampidinana mora ao anaty fehezana 19 ″ EIA.
Fampahalalana fanampiny an'ny GPX-32ahitana:
Fanamboarana eny amin'ny birao miaraka amin'ny SLSWebControls mandray an-tanana ny fampiharana fanaraha-maso lavitra izay misy sata mifehy, fehezina, ary metering
Fitantanana SNMP fitantanana fitaovam-panorenana misy eo an-toerana
Fanaraha-maso ny fitaovan'ny tambajotra
Fampandrenesana fanairana / hetsika fanaingoana amin'ny alàlan'ny fandrika SNMP, mailaka ary API RESTY
Ny fanaraha-maso ny tsy fahombiazan'ny fanovana, tatitra ary fitantanana diso
Fifanarahana feno amin'ny SLSControls efa misy Axess Management Systems
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny GPX-32, mitsidika www.suitelifesystems.com/gpx-32/.
Rafitra sy fandefasana SuiteLife
Ny mampiavaka ny indostrian'ny fampitana dia tsy hita amin'ny fahasamihafan'ny famoronana sy ny atiny ao anatiny ihany. Fa ny fototry dia aorina sy mitombo vokatry ny fandrosoana. Toy izany koa no azo anaovana ny asan'ny orinasa iray SuiteLife Systems, ary ny fomba nametrahana azy tamim-pahombiazana ny Advanced Automation System Solutions izay nanampy ny indostrian'ny fahitalavitra mba hivoatra. The GPX-32 Ny Broadcast Monitoring & Management Platform dia ohatra voalohany amin'ny hoe mahomby kokoa ny fizotran'ny fitantanana ny votoatiny ho an'ny mpamorona votoaty, indrindra raha ilaina foana ny votoatiny vaovao sy mamelombelona. Ny fananana fitaovana iray ahafahan'ny matihanina matihanina amin'ny fitantanana, ny fanaraha-maso ary ny fifehezana ny votoatiny dia tsy manatsotra ny fizotran'ny fandaminana azy fotsiny, fa manatsara ny fahafahan'izy ireo manorina mpihaino haingam-be sy mihabe.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny SuiteLife Systems, tsidiho www.suitelifesystems.com/.
Ny fakantsary fakan-tsary feno B & H dia maka sary an-tsaina ny famokarana - May 15, 2020
Rindrambaiko Axess Rafitra Axess fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa Fanaraha-maso & fandaharana fanaraha-maso fahitalavitra afa-po GPX-32 Pro IT consulting fanaraha-maso sy fanaraha-maso vahaolana Vahaolana NOC rafi-pitantanana rafitra fahaiza-mitantana marani-tsaina / maitso Solosaina vahaolana maoderina Advanced SuiteLife Systems Ultra HD Forum interface tsara eran-tany Video injeniera sary fampisehoana 2020-04-28
Previous: Ny fahazoan-dàlana antsasaky ny vidin'ny DejaEdit dia hatramin'ny faran'ny volana Jolay -
Next: Pliant Technologies 'SmartBoom Headsets dia manome fanavaozana eo noho eo ho an'ny rafitra Intercom